Snapdragon 730 na Snapdragon 665 na-agafe akara ngosi AnTuTu | Gam akporosis
Snapdragon 665 na 730 gafere AnTuTu
Otu izu a, Qualcomm gosipụtara ihe ọhụụ nso nke processors maka ufọt ufọt nso. Anyị nwere n'etiti ha Snapdragon 665 na Snapdragon 730. Ndị nhazi ọhụụ nke ụlọ ọrụ America na-achọ ịnọgide na-achị na nke a na gam akporo. Bọchị ole na ole ka ha nyechara akwụkwọ ozi, mmadụ abụọ n’ime ha gafere AnTuTu.
N'ụzọ nke a, anyị nwere ike ịhụ ihe ndị a ọhụrụ Qualcomm processors na-ahapụ anyị na usoro nke arụmọrụ. N'okwu a, ọ bụ Snapdragon 665 na Snapdragon 730 gafere websaịtị a ma ama. Nnwale arụmọrụ dị mkpa, n'ihi na ịchọrọ ịhụ mmezi nke ụlọ ọrụ ahụ webatara na nke a.
Onye mbụ n’ime ha gafere ule AnTuTu a bụ Snapdragon 730. Onye nhazi ọhụụ maka ụlọ ọrụ kachasị elu nke ụlọ ọrụ ahụ. N'echiche a, ọ na-ahapụ anyị ozi ọma. Ka ọ na-aga n'ihu ewebata ndozi na okwu nke ọrụ. Ọ na - enweta akara nke ihe 213.113, nke mere na ọ karịrị onye bu ya ụzọ na nke a. Nakwa ụdị egwuregwu ọ rụpụtara arụpụta ezigbo ihe. Na nke gị, akara nke 222.538.
N'akụkụ nke ọzọ nke mkpụrụ ego anyị na-ahụ Snapdragon 665. Ihe nhazi ọhụụ ọhụrụ, akara aka iji dochie Snapdragon 660 na ahịa. Ma n'ọnọdụ nke ya, ule ndị ahụ na-eme ka anyị nwee mmetụta nke ndakpọ olileanya. Ebe ọ bụ na a processor erubeghị ọkwa a tụrụ anya ya, ọ na-adị ọbụna n'okpuru nke gara aga. Nke bu ihe n’enwe obi ojoo.
Ha fọrọ nke nta ka ha hà nhata ike CPU. Agbanyeghi na aghaghi iburu n’uche na udiri ihe nlere anya a bu ihe ngosi. Mgbe ahụ enwere ike na nyocha n'ọdịnihu, ma ọ bụ na arụmọrụ ya na ama nwere nsonaazụ kacha mma. Mana mmetụta nke Snapdragon 730 na Snapdragon 665 dị iche.
Maka ugbu a anyị amabeghị igwe ndị dị na gam akporo Ha ga-eji otu n’ime Snapdragon 730 ma ọ bụ Snapdragon 665 a. Anyị nwere ike ịnwe data mbụ na nke a n'oge na-adịghị anya. Anyị na-atụ anya ịchọta n'oge na-adịghị anya, ebe ha bụ ndị nhazi abụọ na ụkpụrụ akpọrọ ka ha chịa na etiti a na gam akporo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Snapdragon 665 na 730 gafere AnTuTu
WhatsApp, Facebook na Instagram agbadata
Ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ekwentị ekwentị gị anaghị eti mgbe ha kpọrọ gị